गलाको क्यान्सर - प्रारम्भिक चरणहरूमा लक्षणहरू, सबै लक्षणहरू र चिन्हहरू, फोटो
गर्दनको क्यान्सर - रोगको सबै चरणहरूमा लक्षण र प्रजनन
तथ्याङ्कको अनुसार, गलेको क्यान्सर, प्रायः लक्षणहरू लुकेको छ, यस अंगको ट्यूमरको लगभग 70% मामलाहरूको खाता। जोखिम समूह पुरुषहरु बाट बनेको छ - आन्कोलोजीको बिरामीहरु मा, अङ्गोलजीजी धेरै पटक पत्ता लाग्यो। समयमै थेरेपी संग ठीक मान्छे को संख्या 60% छ।
गले क्यान्सर - कारणहरू
गलेको क्यान्सर लेरीक्स र फरिन्क्सको चिसो झिल्लीको घाँटी सँगसँगै छ। अधिकांश अवस्थामा, गठन पछि, एफओसी पड़ोसी ऊतक र अंगहरूमा फैलिएको छ। रोगविज्ञान विकास को कारणहरु धेरै छन्, त्यसैले चिकित्सकहरु को लागि एक विशिष्ट प्रकचन कारक बाहिर एक्लै अक्सर मुश्किल छ। गलेको क्यान्सर के हो भनेर व्याख्या गर्न सम्भावित कारणहरूमध्ये, डाक्टरहरू सम्भावित छन्:
हानिकारक उत्पादनमा काम गर्दछ र हानिकारक धुलोहरूको साँघुरो (वार्निश र पेंटहरू, रसायनहरू);
मौखिक स्वच्छताको उल्लंघन;
टाउको टाउको, गर्दन;
बलियो विकिरण जोखिम, विकिरण बिरामी ;
आहारमा नुन र स्वादयुक्त खाना, सब्ज र फलहरूको कमी।
रोगविज्ञानको विकासको सम्भाव्यताले निम्न रोगहरूको उपस्थिति बढाउँछ:
माथिल्लो श्वसन पथको पुरानो सूजन प्रक्रियाहरू ( फरिन्गाइटिस , लारीन्गाइटिस, साइनसाइटिस);
कुन उमेरमा गले क्यान्सर हुन्छ?
धेरै नराम्रो अवस्थामा, यो रोग जवान रोगीहरुमा दर्ता गरिएको छ। गलाँसको क्यान्सरको निदानको साथ, रोगीहरूको उमेर अधिक पटक 60 वर्ष भन्दा बढी हुन्छ। तथ्याङ्कहरूको अनुसार, यो रोगविज्ञान मुख्यतया मानिसहरूद्वारा प्रभावित हुन्छ - एक बलियो सेक्सले प्रायः निकोटीन र अन्य खराब बानीहरूको स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्छ जसले स्वास्थ्यलाई असर गर्छ। समान निदान संग लगभग हरेक रोगले धूम्रपान गर्दछ वा लामो समयसम्म निकोटीन लतको अधीनमा रहेको छ।
गले क्यान्सरका प्रकारहरू
अधिकतर अवस्थामा, घातक प्रकृतिको गला ट्यूमर यसको मूलमा स्क्वामस सेल सेलसेन्सोमासँग सम्बन्धित छ। शास्त्री विशेषज्ञहरूको अनुसार, 95% भन्दा बढी घटनाहरू यस प्रकारको रोग विज्ञानमा हुन्छन्। ट्यूमरको संरचनाको मनोवैज्ञानिक विशेषताहरूको आधारमा भिन्नता छ:
अत्यधिक क्यान्सर अलग।
पहिलो प्रकार चाँडो विकास र मेटास्टेसहरूको ठूलो संख्याको आधारमा विशेषता छ। ट्यूमर सक्रियतः आसपासको ऊतकों मा खुट्टा हुन्छ। यो अन्य भन्दा अधिक प्रायः हुन्छ र लेरीनको माथिल्लो भागमा स्थानीयकृत गरिन्छ। गैर-कोरोनरोस गलेको क्यान्सर, जसलाई फोटोले सक्रिय वृद्धिको कारण तल दिइएको छ, लरीक्सक्स को कम गर्न को लागी हुन्छ, जिसके परिणामस्वरूप स्नेहीपन र सांसको कमी।
गलाको गलेको क्यान्सर, तलका लक्षणहरू तल ढिलो हुन्छन्, एक ढिलो पाठ्यक्रम छ र व्यावहारिक रूपमा अन्य अंगहरूमा मेटास्टेसहरू बनाउँदैन। ट्यूमर को विकास को पसंदीदा ठाँउ मुखर शब्दहरु हो। अत्यधिक विभेदित प्रकारको साथ, राजनैतिक प्रक्रियामा स्वस्थ ऊतकहरूको छिटो संलग्नता हुन्छ। यस्तो गले क्यान्सर, जसका लक्षणहरू तल सूचीबद्ध छन्, उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ।
गलाँसको क्यान्सर - सबै लक्षणहरू
गलाको क्यान्सरको लक्षण, तिनीहरूको उपस्थितिको समय, लक्षणहरूको गम्भीरताले शिक्षा शिक्षाको स्थानीयकरणको कारण हुन्। यसैले, पहिलो लक्षणहरूमा माथिको विभाजनको हारको साथमा, निगल गर्दा निद्राको दुखाइले घोर दुख्छ, गले लामो समयको दुखाइ। एक अतिरिक्त चिन्हको रूपमा, डाक्टरले दाँतमा दुख्छ र उनीहरूको हानि।
जब लरीनक्स को घाव संग निचो भागहरुमा एक ट्यूमर रूप, रोगियों को आवाज मा एक अचानक परिवर्तन को नोटिस। जब भ्वाईस अंतर रोकिएको छ, रोगीले सबै कुरा गर्न सक्दैन। गम्भीर अवस्थाहरूमा, उपयुक्त उपचारको अनुपस्थितिमा, सास फेर्ने समस्याहरू, एसिफियाियाले रोगीको जीवनलाई धम्की दिने सम्भव छ।
गलाको क्यान्सर - पहिलो लक्षण
आवाजमा अचानक परिवर्तन, हजुरआमापन, क्याटर्रल र भ्रामक रोगहरूको अनुपस्थितिमा चिसोपन गले क्यान्सरको पहिलो संकेत हो। प्रगतिको रूपमा विकास, डाइस्फ्यागिया - खाने र पानी निगलँदा एक दुखद अनुभूति। रोगको मानवीकरणले गलाँसको क्यान्सरको स्तरमा निर्भर गर्दछ। उचित उपचारको कमी रोगको प्रगति र नयाँ लक्षणहरूको उपस्थिति को लागी हो:
ग्रीवा लिम्फ नोड्स बढयो ;
मुखबाट ढोका गन्ध
रक्त अशुद्धताको लारमा उपस्थिति;
खाँसी संग फुल्म;
सुनको गम्भीरतामा कमी (केही अवस्थामा)।
गलाको क्यान्सर - चरण 1
जब मर्मतले मात्र गलेको क्यान्सर विकास गर्दछ, रोगको प्रारम्भिक चरणमा लक्षणहरू अनुपस्थित हुन सक्छ। रोगको आकलन गर्दा, ट्यूमरको स्वभाव, डाक्टरहरूले ध्यान दिए:
मुखर शब्दहरूको गतिशीलता;
मेटास्टेस (नम्बर, आकार)।
कस्तो घाँटीको क्यान्सरले रोगको चरणमा निर्भर गर्दछ। पहिलो चरणमा ट्यूमरले भोल्युममा बढ्न थाल्दछ र लरीनक्स भन्दा माथि रहेको छ, आवाज अपरिवर्तित बनेको छ। क्यान्सर सेलहरू ग्लोबिसमा पाइन्छन्, तर लिगामेटहरू अझै सामान्यतया कार्य गर्न सक्षम छन्। ट्यूमरको आकार सानो छ - व्यासमा केहि मिलीमीटर। Atypical कक्षहरू larynx को माइक्रस झिल्लीमा उपस्थित छन्।
गले क्यान्सर - चरण 2
दोस्रो चरणमा, गलाँसको क्यान्सर (प्रारम्भिक चरणमा लक्षणहरू अनुपस्थित हुन सक्छ) आफूलाई आवाज परिवर्तन गरेर महसुस गर्दछ। रोगीय प्रक्रियाले लरीनक्सलाई कैप्चर गर्दछ। एपिग्लोटिसमा, डाक्टरहरू एकभन्दा बढि फोकस पत्ता लगाउँछन्, यसको अलावा, पथोलोजीको फेसी पड़ोसी ऊतकहरूमा देखा पर्छ। नतिजाको रूपमा, मुखरका शब्दहरूको सामान्य आचरण बिग्रिएको छ, जसले विशेषताको लक्षण उत्पन्न गर्दछ: हजुरता, रगत। धीरे-धीरे, ट्यूमरले लेरीनक्स पुरा गर्न सक्दछन्, तर लिम्फ नोडहरूमा कुनै मेटास्टेसहरू छैनन्।
गला कैंसर - चरण 3
यस चरणमा, गलाँसको क्यान्सर, माथि उल्लेख गरिएका ती चिन्हहरू र लक्षणहरू फरक फरक छैनन्, पूर्णतया लारीर र वरपरको ऊतकहरू सीप गर्दछ। Vocal cords सामान्यतया चल्न सक्दैन, आवाजको पूर्ण हानि हुन्छ। Atypical कोशिकाहरू सीधा लरीनक्सको ऊतकमा देखा पर्छन्। निदानको समयमा, डाक्टरहरूले ट्यूमरको छेउबाट अशुद्ध लिम्फ नोड्स पत्ता लगाउँछन्। लिम्फ नोडको व्यास3सेमीको व्यास पुग्न सक्छ।
गलाको क्यान्सर - चरण 4
यस्तो अकालोल रोगको कारण गलाँसको क्यान्सर जस्तै बीमारीको अन्तिम चरण लेरीनक्स र फरिन्क्सको कुल हार संग छ। रासायनिक प्रक्रिया माथिल्लो श्वसन पथमा पार हुन्छ। ट्यूमरहरू र यसको मेटास्टेसहरू गर्दनको ऊतकहरूमा फैल्न सक्छन्, ट्रिचिया, थाइरोइड ग्र्ल्याण्डले केहि अवस्थाहरूमा पाचन प्रणालीको माथिल्लो भाग घुमाउँछ - खुट्टामा असर पार्छ। लिम्फ नोडहरू भोल्युममा ठूलो मात्रामा वृद्धि गर्छन्। तिनीहरूको व्यास6सेन्टिमिटर पुग्छ। यी परिवर्तनहरूले पाचन र श्वसन प्रणालीलाई बाधा पुर्याउँछ।
गला कैंसर - निदान
गलाको क्यान्सरको निदान Pharynx, larynx को एक व्यापक परीक्षा मा आधारित छ। ल्यारोलोजी को पहिलो लक्षणहरु लाई लारीङ्गोस्कोपी संग पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो विधिले विशेष उपकरणको मद्दतबाट लेरीनक्स को जांच गर्न मद्दत गर्दछ - एक लारीङ्गोस्कोप। प्रक्रियाको समयमा, डाक्टरले मुखमा तह, लारीनक्स, फरिन्क्स र मौखिक गुफाको मूल्यांकन गर्दछ। Laryngoscopy संग, पछि बायोप्सी को लागि एक ऊतक नमूना लिन सम्भव छ - एक हिस्टोलिकल अध्ययन जो कैंसर कोशिकाओं, उनको एकाग्रता को निर्धारण को निर्धारण गर्दछ।
गर्दनको क्यान्सर को निदान को लागी, परीक्षा को समयमा लक्षण अनुपस्थित हुन सक्छ, निम्नलिखित विधिहरु लाई अतिरिक्त उपयोग गरिन्छ:
गणना गरिएको टमोग्राफी (सीटी);
चुम्बकीय अनुगमन इमेजिंग (एमआरआई)।
गलाँसको क्यान्सर - प्रजनन
यस्तो रोग संग एक गले को क्यान्सर को रूप मा, कितने रोगी जी रहे हो - यस प्रश्न को रुचिहरु लाई रोगीहरुलाई अधिकतर। डाक्टरहरूले अनावश्यक जवाफ दिँदैनन्। आधुनिक निदान टेक्नोलोजीले हामीलाई सही ढंगले निर्धारित गर्न अनुमति दिदैन कि एक ट्यूमरले कुन गति विकास गर्नेछ, कुन ऊतक र अंगहरू प्रक्रिया प्रक्रियामा संलग्न हुनेछन्।
चिकित्सकहरु द्वारा बनाईएको पूर्वानुमान नैदानिक ​​अवलोकनहरु को डेटा मा आधारित हुन्छन्, गर्दन को क्यान्सर देखि पीडित रोगहरु संग हुने परिवर्तनहरु को विश्लेषण, जसको लक्षण केहि मामलाहरुमा संशोधित हुन सक्छ। पथोलोजी आकलन गर्न डाक्टरहरूले विचार गरेका मुख्य कारकहरू हुन्:
प्रभावित अंगहरूको संख्या;
ट्यूमर को प्रवेश को गहिराई;
के यो गलेको क्यान्सर उपचार गर्न सम्भव छ?
यदि ग्लिसर क्यान्सरको उपचार प्रारम्भिक चरणमा सुरू भएको छ भने पथोलोजी को छोडेर सम्भव छ। उपचारको आधार सर्जिकल हस्तक्षेप हो। सञ्चालनको तरिका, यसको भोल्युम खातामा विशेषताहरू र नैदानिक ​​अभिव्यक्तिहरू लिइरहेका हुन्छन्। उत्कृष्ट परिणामहरूले क्यान्सरको प्रारम्भिक चरणहरूमा लेजर ट्यूमर हटाउने प्रविधि देखाउँछ। अपरेन्टिभ हस्तक्षेपलाई प्रायः 1-2 चरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ। रोग विज्ञानको अवस्थामा, 3-4 चरणहरु chemo- र रेडियोथेरेपी प्रयोग गर्दछ। यी प्रविधिहरूले ट्यूमर प्रक्रियालाई ढिलो गर्छ, रोगको समग्र भलाइमा सुधार गर्छ, आफ्नो जीवन लामो पार्छ।
गले क्यान्सर - अस्तित्व प्रजनन
माथि उल्लेखित रूपमा, कुनै विशेषज्ञले भविष्यवाणी गर्नाले कसरी घातक गले सुँगुर थेरेपी हुनेछ वा भविष्यमा प्रगति गर्नेछ, उपचार गरे पनि। विशेषज्ञहरूले मात्र मान्न सक्छन् कि रोगी के हुनेछ, नैदानिक ​​अभिव्यक्ति को आधार मा र उनको स्वास्थ्य को स्थिति मा। यस अवस्थामा, हामीले प्रत्येक जीव अलग व्यक्तिलाई बिर्सनु हुँदैन, त्यसैले पूर्वानुमानको भक्ति देख्न सकिन्छ।
यदि तपाईं धेरै वर्षको लागि एकत्रित तथ्याङ्कमा लिनुहुन्छ भने, चरण 1 गले क्यान्सर भएका बिरामीहरू 85% मामलाहरुमा निदान गरे5वर्ष पछि। स्टेज4पथोलोजीसँग रोगीहरूको बीचमा पाँच वर्षको बाल्यकाल दर 20% हुन्छ। निर्धारण कारक laryngectomy हुन सक्छ - vocal cords हटाउन को लागी एक अपरेशन। यो सर्जिकल हस्तक्षेपले रोगीको जीवनलाई लामो पार्छ, ट्यूमरको फैलावट रोक्छ। तर व्यवहारमा, सबै रोगीहरू यसको कार्यान्वयनमा सहमत छैनन्।
केमोथेरेपीका लागि एन्टीमेटिक औषधि
उच्च डिग्रीको माइपिया
तापमान बिना ठंड
फास्ट र प्रभावकारी दन्त दर्द गोलियां - सर्वश्रेष्ठ ड्रग्स को समीक्षा
लागूऔषधहरूसँग जिगरको उपचार
चिसो धुलो हिलिबुट
भान्साको लागि रंग समाधान
पिताजीको उपहार 55 वर्षको लागि उपहार
मास्किंग: "विशेषज्ञ" को स्तर, वा अजनबी को बीच तपाईंको आफ्नै!
जब म वसन्तमा सेब लगाउन सक्छु?
पनीर पनीर पनीर
दूधको साथ कोकोआ - नुस्खा
मानिसहरू किन विवाहित छन्?
बर्लिनले एमले कसरी मद्दत गर्छ?
आँखाका लागि स्पार्कलहरूसँग मेकअप गर्नुहोस्
माइक्रोवेव ओवनमा डम्पलिंग
ठूलो फलले गर्दा
बच्चालाई 1 महिनामा कति पर्छ?
शेख मोहम्मदको पैलेस
सम्मोहन कसरी गर्ने?
उत्प्रेरक पछि क्रिस्टाइटिस - कारण हुन्छ
ह्याम्बर्गर कसरी बनाउने?